A Podcast Bochum, Syndication, Nkwalite Ndepụta | Martech Zone
Afọ gara aga bụ afọ Podcasting gbawara na ewu ewu. N'ezie, 21% nke ndị America karịrị afọ 12 kwuru na ha gere ntị na pọdkastị na ọnwa gara aga, nke ejiriwo nwayọọ nwayọọ na-arịwanye elu n'afọ n'afọ site na 12% kesara na 2008 ma ana m ahụ na ọnụọgụ a na-eto eto.
Yabụ ị kpebiri ịmalite Podcast nke gị? Ọ dị mma, enwere ihe ole na ole ị ga-ebu ụzọ tụlee - ebe ị ga-anabata pọdkastị gị na ebe ị ga-akwalite ya. N’okpuru ebe m depụtara aro ole na ole m mụtara site n’ịkwalite pọdkastị anyị Edge nke Weebụ, ya mere enwere m olile anya na ha ga-aba uru maka gị!
Onodi Podcasting na Ihe ngosi
Emechara m ihe omumuihe maka pọdkastị nke ndị ọrụ iji kesaa usoro ụfọdụ iji kọwaa ma kwalite pọdkastị ha. Anyị jiri ọtụtụ n'ime usoro ndị a mee ihe Dell Luminaries pọdkastị, na-agbanye ya n'ime 1% pọdkastị azụmahịa niile.
Ebee ka ị nọrọ n'ụlọ Podcast gị
Tupu ikesa na ndekọ ọ bụla, ọ ga-adị mkpa ikpebi ebe ị ga-aga usu gị Podcast. Ikpebi gị pọdkastị Bochum ga-adabere n'ọtụtụ ebe ị nwere ike ịnyefe Podcast gị dịka ụfọdụ ndekọ aha nwere njikọ ụfọdụ na ndị ọzọ. Maka Podcast anyị, Edge nke Weebụ, anyị na Libsyn na-anabata ya ma ọ bụ otu n'ime ndị ọbịa ama ama karịa.
Anabatala pọdkastị gị na ndị na-ahụ maka web ma ọ bụ na weebụsaịtị gị ugbu a. Gburugburu Podcast nwere ihe owuwu e wuru maka nnukwu faịlụ faịlị mmiri iyi ma budata na weebụ. Ahụkarị web mba gburugburu nwere ike ime ka ị na-ege ntị interruptions na ike ọbụna na-eri gị ego na overage akwụ ụgwọ na bandwit ojiji.
Martech ZoneNdụmọdụ bụ ịnabata ya transistor. Ị nwere ike ịgụ nchịkọta nke podcast ikpo okwu ebe a, ma na nkenke, ọ dị mfe iji, nwere ihe ngosi ngosi na-akparaghị ókè, ma nwee ụfọdụ nnukwu ngwá ọrụ maka imekọ ihe ọnụ na azụmahịa.
Debanye aha maka nnwale Transistor n'efu nke ụbọchị iri na anọ
Fewfọdụ ụlọ ọrụ Bochum Podcast ndị ọzọ ị nwere ike iji bụ:
Acast - Nchọpụta Podcast, ige ntị, nnabata, na nkesa RSS.
Anchor - Mepụta ma kwado usoro ngosi na-akparaghị ókè, kesaa ihe ngosi gị ebe niile, wee kpata ego. Ha niile n'otu ebe, ihe niile n'efu.
Ọdụ ọdịyo - Gakwuru ndị na-ege ntị raara onwe ha nye ma nyefee ozi akara gị site na ntinye mgbasa ozi siri ike na nkwenye sitere na nkà kacha elu na pọdkastị.
Agbanye blubrry - Blubrry.com bụ obodo a na-etinye Podcasting na ndekọ na-enye ndị okike ikike ịme ego, nweta nha ndị na-ege ntị n'uju ma kwado ọdịyo na vidiyo ha. Ma ị bụ onye okike mgbasa ozi, onye mgbasa ozi ma ọ bụ onye na-azụ ahịa mgbasa ozi, Blubrry bụ interface mgbasa ozi dijitalụ gị.
Nnukwu egwu - Start pọdkastị taa na free Podcast Bochum si Nnukwu egwu, kacha mfe Podcasting software maka Bochum, nkwalite, na nsochi gị Podcast.
Gbasara - Site na nnabata na ịhazi usoro ihe na nchịkọta, Casted bụ usoro njikwa ọdịnaya maka ndị na-ere ahịa B2B nwere olu.
Fireside - Pọdkastị pụrụ iche nwere ọmarịcha njirimara njirimara nke na-etinye weebụsaịtị yana pọdkastị gị.
Libsyn - Libsyn na-enye ihe niile gị pọdkastị chọrọ: ebipụta ngwá ọrụ, media mba na nnyefe, RSS maka iTunes, a Web Site, stats, Advertising Programs, Premium Content, Apps for Apple, Android & Windows devices.
Megaphone - ngwaọrụ iji bipụta, monetize, na tụọ azụmahịa gị Podcast.
Omny Studio - Omny Studio bụ ihe ntinye aka nke pọdkastị nke abanye na ntanetị nke gụnyere nchịkọta akụkọ ntanetị, itinye ego na ntanetị, njide mgbasa ozi, mkpesa na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ.
PodBean - Ultra Ultra podcast Publishing ngwọta. Unlimited bandwit na nchekwa. Ihe niile pọdkastị kwesịrị ịnabata, kwalite ma soro pọdkastị gị.
Dị mfe - Kwusaanụ pọdkastị gị n'ụzọ dị mfe.
SoundCloud - Podcasting na SoundCloud na-eme ka ọ dị mfe maka onye ọ bụla ịkọ akụkọ, bulite, ma kesaa. Wulite obodo gi n’elu igwe okwu nke odi nma na nke di omimi na uwa.
Spreaker - Spreaker nwere ya niile! Melite akaụntụ gị ma dị njikere ka ịdekọ pọdkastị ma ọ bụ kwado ihe ngosi redio dị na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka
Igwe Podcast - Adịchaghị Podcast Bochum: Mee ngwangwa na nke kachasị mma.
Mgbe ị melite pọdkastị gị, ị ga-enwe faili RSS dị mma. Ọtụtụ oge mgbe ị na-edozi akaụntụ nnabata Podcast ị ga-atụ uche ihe ga-emebi ndepụta RSS. Tupu ịnyefe na ndekọ ọ bụla, ị ga-enyocha iji hụ ma ndepụta RSS gị ọ dị irè. Iji nwalee ndepụta RSS gị, jiri Nkedo ndepụta Validator iji hụ ma ị mehiere ihe ọ bụla. Y’oburu n’inwe onu oriri, bia banye na ntuziaka gi.
Ebee ka ị gbakwunye Podcast gị
Akụkụ nke akụkụ: Tupu ị nyefee pọdkastị gị na nke ọ bụla n'ime akwụkwọ ndekọ aha ndị dịnụ, ana m akwado ka ịnwee ihe karịrị otu pọdkastị na ndepụta RSS gị. Nwere ike ido onwe gị n'okpuru ọtụtụ akwụkwọ ndekọ aha naanị otu pọdkastị, mana maka ọtụtụ ndị na-ege gị ntị na pọdkastị gị, ha ga-achọ ịhụ karịa ihe emume ahụ tupu ịdenye aha na ngosi gị.
n'ihi na iPhone na android ngwaọrụ na-achịkwa ahịa mkpanaka, ndebanye aha abụọ a bụ ihe dị mkpa maka pọdkastị ọ bụla!
iTunes - Mgbe ịmechara ndepụta RSS gị, ịnyefe pọdkastị gị na iTunes kwesịrị ịbụ nzọụkwụ mbụ gị. iTunes nwere otu n'ime netwọkụ kachasị ewu ewu nke ndị na-ege ntị maka Podcasters. Ga-ebu ụzọ nweta Apple ID, ọ bụrụ na i nwee iPhone, ị kwesịrị inwe ID ugbua. Banye na nke a Podcast iTunes njikọ njikọ na Apple ID gị ma mado ndepụta RSS gị n'ọhịa URL ma nyefee ihe ngosi gị. Dabere na akaụntụ gị, enwere ike ịnabata ya ngwa ngwa ma ọ bụ were ụbọchị ole na ole. Ozugbo anabatara gị na iTunes, ihe ngosi gị ga-apụta na ọtụtụ pọdkastị ndị ọzọ dị iche iche na-akpaghị aka dịka ngwaọrụ ndị ahụ na-enweta nri ha site na iTunes. O di nwute, na iTunes, ị gaghị enweta ihe ọ bụla nchịkọta jikọtara na akaụntụ gị.
Debanye aha gị Podcast na iTunes
Nchịkọta Pọdkastị Google - Google weputara ikpo okwu ya na ihe omuma di iche iche maka inyocha nnunu pọdkastị gị. Pụrụ ịhụ ọnụ ọgụgụ nke ejije, ejije na nke mbụ 30 ụbọchị, nkezi oge, na mgbe ahụ nyochaa arụmọrụ karịrị oge. Jiri akaụntụ Google wee banye, wee soro usoro ndị a tinye pọdkastị gị.
Deba aha Podcast gị na Google
Pandora - Pandora na-aga n'ihu na-abụ nnukwu ndị na-ege ntị ma na-akwado pọdkastị nke ọma, ọbụnadị nwere ike ịtụgharị ya.
Deba aha gị Podcast na Pandora
Spotify - Spotify na-aga n'ihu ịgbasa n'ime ọdịnaya ọdịyo na, na nzụta nke Anchor, na-ewere nnukwu ebumnuche ịnweta usoro ahụ. N'inwe ọtụtụ ndị ọrụ, ịgaghị achọ ịhapụ!
Deba aha Podcast gị na Spotify
Amazon - Amazon Music bu onye ohuru ohuru mana ya na Audible, Prime, na onye enyemaka olu nke Alexa ruru, ikwesighi ịhapụ uzo di nkpa a.
Debanye aha gị Podcast na egwu Amazon
Nhọrọ, ị nwekwara ike ịdenye Podcast gị site na iji ngwaọrụ na ndekọ ndị a iji gbasaa iru gị:
Kwuru - Ọbụna ma ọ bụrụ na agbadoro Podcast na onye na-eweta ọrụ ọzọ, ịnwere ike ịdenye pọdkastị gị na akaụntụ nweere onwe gị.
Tinye Podcast gị na Acast
AnyPod - AnyPod bụ nkà ama ama maka ngwaọrụ Amazon-kwadoro.
Tinye Podcast gị na AnyPod
Agbanye blubrry - Agbanye blubrry bụkwa nnukwu ndekọ ndekọ pọdkastị na Internetntanetị, karịrị ndepụta pọdkastị 350,000. Ha na-enye mgbasa ozi na ọrụ ndị ọzọ maka pọdkastị.
Mepụta Free Blubrry na Akaụntụ ma Tinye Podcast gị
Onye nlekota - Onye nlekota bụ a ahịa na-ere na-akwalite pọdkastị gị. Ngwa ha dị ezigbo mma, ma na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe gị pọdkastị na-enye aka.
Jikọọ Podcast na Mgbasa gị
Kaadị - Kaadị na-enye Castbox Creator Studio, ngwaọrụ dị iche iche na nchịkọta pọdkastị siri ike ka ị nwee ike ịlele ma soro ndị debanyere aha gị yana iyi ma nye nbudata.
Ntụziaka Na tingnyefe Podcast gị na Castbox
iHeartRadio - n'ihi na iHeartRadio, nke a bụ ebe ọ na-akwụ ụgwọ ịnwe Libsyn ka ọ nọrọ n'ụlọ gị. Ha nwere mmekọrịta na iHeartRadio ma ị nwere ike ịtọlite ​​akaụntụ Libsyn gị iji mepụta ma rie ọwa gị na-akpaghị aka. Iji tọọ ntọala a, n'okpuru taabụ “Ebe njedebe” na akaụntụ gị, pịa “Tinye Ọhụrụ” wee soro ntuziaka ka ịtọlite ​​iyi iHeartRadio. Mara: Pọdkastị gị kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ ihe karịrị ọnwa abụọ n'ime Libsyn tupu ị nwee ike ido onwe gị n'okpuru iHeartRadio.
Nyefee Podcast gị na iHeartRadio
keiwuba - Ọ bụrụ na pọdkastị gị adịworị na iTunes, ọ ga-egosi n’ime otu ụbọchị na Oke. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ịnwere ike iji aka tinye ya:
Iji aka Tinye Podcast gị na Oke
Ebube akpa - A web-based na mobile ngwa na-enyere ndị ọrụ jikwaa na-ege ntị gafee ngwaọrụ. Nyefee gị Podcast site na N'akpa uwe na-edo onwe ha n'okpuru page.
Nyefee Podcast gị na obere akpa
Podchaser - nchekwa data Podcast na ihe nchọta. Ebumnuche ha bụ ime ka ọ dịrị gị mfe ịnye nzaghachi gbasara pọdkastị ị hụrụ n'anya ma dị mfe ịchọpụta pọdkastị. Chọta pọdkastị gị na Podchaser ma ị nwere ike ịrịọ ya site na iji ozi ịdenyere aha na ntanetị gị.
Na-ekwu Podcast na Podchaser gị
Pọdknife - Podknife bụ ndekọ dị n'ịntanetị nke pọdkastị nke na-arụ nnukwu ọrụ nke ịhazi pọdkastị site na isiokwu na ọnọdụ. Ọrụ nwekwara ike inyocha na ọkacha mmasị ha ọkacha mmasị pọdkastị. Ozugbo ị debanyere aha na nbanye, ị ga-ahụ njikọ ntinye na menu.
Debanye aha maka Podknife
RadioPublic - RadioPublic bụ ahụike, ihe atụ, na nkwado ego nwere ike ịnwe Podcast na-ege ntị. Anyị na-enyere ndị na-ege ntị aka ịchọpụta, soro ha, ma kwụọ ụgwọ ndị na - eme Podcast - gị. Nyochaa ngosi gị na RadioPublic iji bido ijikọ ndị na-ege gị ntị taa.
Kpee Podcast gị na RadioPublic
Stitcher - Onwe ya, Stitcher bụ ọkacha mmasị m Podcast ngwa. A na - eme ihe niile m na - ege ntị na ngwa a. Stitcher bụ ngwa n'efu nwere ihe ngosi 65,000 redio na pọdkastị dị. Nyefee gị Podcast, ị ga-mkpa banye dị ka a na onye òtù ọlụlụ. Ihe ngosi gi di na Portal Partner.
Tinye Podcast gị na Stitcher
TuneIn - TuneIn bụ ndekọ ndekọ aha ọzọ ị nwere ike ịnyefe pọdkastị gị. Nyefee gị Podcast, ị ga-mkpa dejupụta ha ụdị. Will gaghị enwe akaụntụ na TuneIn dị ka ị ga-enwe na ndekọ ndị ọzọ. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ imelite ihe ọ bụla na ndepụta gị, ị ga-aga usoro a ọzọ. TuneIn nwekwara Amazon Skill ebe enwere ike igwu Podcast gị site na ngwaọrụ ndị nwere ike Alexa!
Tinye Podcast gị na TuneIn
Emebi - ebe nbugharị ọdịyo maka ụdị ụdị okike okike, yana onye ọ bụla hụrụ n'anya na-ege ntị. Anyị na-akwado ndị na-emepụta ọdịyo site na ụdị igwe ojii anyị ma nyere ndị na-ege ntị aka ijikọ ọdịnaya nwere isi iji gee ntị.
Na-ekwu na Vlọ Ọrụ Vurbl gị
Ekekọrịta Mmemme na Social Media
Igwe okwu - Tụgharịa gị ọdịyo na-ekere òkè na-elekọta mmadụ videos na Igwe okwu.
Isi okwu - Mepụta igwe okwu ọdịyo, ihe ngosi zuru oke na vidiyo, tụgharịa na akpaghị aka, ma kwalite pọdkastị gị na ọtụtụ vidiyo ịchọrọ Isi okwu.
Wave - Wave -enyere gị aka ike audiogram - vidiyo na gị Podcast audio - na ike ga-akọrọ mmadụ iji ha ọkpụkpọ.
Etu esi ewepu Podcast gị
You maara na Google na - egosi pọdkastị nke ugbu a ma gosipụta ha na carousel na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ? Google na-enye nkọwa banyere usoro iji hụ na ederede ederede gị n'isiokwu nkwado ha. Edeela m otu iji hụ na Google maara na ị nwere pọdkastị ma ọ bụrụ na inwere WordPress ma na-akwado pọdkastị na pọdkastị mpụga ọrụ nnabata.
Tinye Pụrụ Iche Banyere Podcast
Ngwaọrụ iOS nwere ikike ịgbakwunye ọkọlọtọ mara mma n'elu weebụsaịtị gị maka ndị ọrụ Apple iPhone iji lelee pọdkastị gị, mepee ya na Podcasts App, ma denye aha ya. I nwere ike ịgụ otu esi eme nke a n'isiokwu a iTunes Smart Banners maka Pọdkastị.
E nwekwara ụfọdụ akwụkwọ ndekọ aha akwụ ụgwọ ị nwere ike iji nọrọ na pọdkastị gị ma ọ bụ jiri ya dị ka ndekọ ọzọ. Ọ bụ ezie na ị nwere ike na-ala azụ ịkwụ ụgwọ ụfọdụ n'ime ndị a, ị maghị ebe ndị na-ege gị ntị na-ege ntị. Aga m akwado ịnwale ha niile ma ọ dịkarịa ala otu afọ wee hụ ụdị stats ị nwetara site na akwụkwọ ndekọ aha ndị a tupu ịkagbu. Ọtụtụ n'ime ndị a na-amalite na akaụntụ efu, mana ị ga-apụ na ngwa ngwa na akaụntụ gị n'efu.
Acast - Acast awade ihe niile ị chọrọ ike na ịkekọrịta gị Podcast n'ebe nile.
Ọdịda ụda - Ọdịda ụda na-enyere ndị pọdkastị aka ịnabata, kesaa ma monetize ọdịyo gị.
PodBean - PodBean dị yiri Spreaker dịka onye nnabata Podcast. Na ahụmịhe anyị, enweela nsogbu na ibubata ndepụta RSS anyị na ọ gaghị enwe ọhụụ kachasị ọhụrụ. Mana n'agbanyeghị nke a, ọ bụ ezigbo ndị ọbịa ama ama n'etiti pọdkastị.
PodSearch - PodSearch na-enye ngwa ọrụ ọchụchọ dị mfe iji, gụnyere edemede, ihe ngosi kachasị elu, ihe ngosi ọhụrụ, yana isiokwu, iji nyere gị aka ịchọta pọdkastị ị ga-enwe. Debanye aha ebe a.
SoundCloud - SoundCloud bụ otu n'ime akwụkwọ ndekọ aha kachasị ọhụrụ nke Edge nke Web Radio dị na yana akaụntụ Libsyn anyị, anyị nwere ike ịmekọrịta ha abụọ na akpaghị aka yana imepụta akaụntụ ahụ dị mfe site na Libsyn.
Onyeka Onwenu - Spreaker bụ onye ama ama ama ama, ọkachasị n’etiti ndị pọdkastị chọrọ iji gosipụta ndụ. Ha nwere ezigbo onye egwu egwu nke ga - eme ka ị mee ndụ gụgharia yana debe usoro nke ọ bụla maka ndị na - agbaghara mgbasa ozi ndụ.
Ekwenyesiri m ike na e nwere ndị ọzọ, mana ndị a bụ akwụkwọ ndekọ aha anyị na-eji Edge Media Studios maka ndị ahịa na-emepụta Podcast anyị. Ọ bụrụ na ị nwere ndị ọzọ na m nwere ike na-atụ uche, jide n'aka na ka m mara na-aza ajụjụ n'okpuru!
Podcast Ndị na-egwu weebụ
WordPress Podcast Sidebar ngwaọrụ - na agbanyeghị ebe akwadoro pọdkastị gị, ịtinye ya na saịtị gị bụ ụzọ dị mma iji nweta ụfọdụ ndị na - ege ntị dị mkpa. The WordPress Podcast Sidebar na-enye ohere ma wijetị ma ọ bụ shortcode ka ị gbanye ndepụta gị niile (na ihe ọkpụkpọ) n'ebe ọ bụla na saịtị gị.
Jetpack - WordPress 'premiere plugin for enhancing your site now has a Podcast block you can add to your content that automatically create a Podcast player.
Nke a bụ ụfọdụ plugins ndị ọzọ akwụ ụgwọ ga-egosipụta pọdkastị gị nke mara mma n'ime WordPress.
MP3 nnyapade Player WordPress ngwa mgbakwunye
Royal Audio Player WordPress ngwa mgbakwunye
HTML5 Audio Player WordPress Plugins ukwu
Easy Audio Player WordPress ngwa mgbakwunye
Sonaar MP3 Player WordPress ngwa mgbakwunye
Echefula ọrụ dị mkpa soshal midia nwere ike ịrụ n'ịkwalite pọdkastị gị, ma nke ọhụụ ma nke ochie! Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram… ọbụlagodi Google +… nwere ike inyere gị aka mee ka ndị na-ege gị ntị dị elu ma nwekwuo ike ige ntị na ndị debanyere aha gị maka ọdịnaya gị.
Na a na-elekọta mmadụ media management ngwá ọrụ dị ka Agorapulse, ị nwere ike kwụ n'ahịrị mbak na profaịlụ ndị ahụ niile n'ụzọ dị mfe, yana ịtọlite ​​mbugharị oge maka pọdkastị ndị ahụ ị nwere ike ịtụle na ọ bụ mgbe niile. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị na-eji ngwá ọrụ dị ka Feedpress, ị nwere ike na-akpaghị aka-ebipụta gị Podcast gị mmadụ mgbasa ozi profaịlụ na-akpaghị aka.
Ka ị na-etolite ndị na-ege gị ntị na nyiwe ndị ahụ, ndị ọhụụ ọhụụ nwere ike ghara ịhụ pọdkastị gị ochie, yabụ nke ahụ bụ ụzọ dị mma iji nwekwuo ọhụhụ. Isi ihe bụ iji mepụta mgbasa ozi mgbasa ozi na-arụ ọrụ, ọ bụghị naanị mgbasa ozi nke aha pọdkastị gị. Gbalịa ịjụ ajụjụ ma ọ bụ depụta ụzọ ndị bụ isi. Ma ọ bụrụ na ị gbara ajụjụ ọnụ ma ọ bụ kpọọ aha ọzọ ma ọ bụ nwee mmetụta, gbaa mbọ hụ na ị pịa ha na mbikọ mmekọrịta gị!
Nkpughe: M na-eji njikọ mmekọ n'ime post a maka ọtụtụ ngwaahịa.
Tags: acastegwu amazononye ọ bụlaọdịyoblubrryigberolọonu ahiaọnụ ụlọ ọrụ mgbasa oziakwụkwọ ndekọ na epodgoogle playihe omumeitunesJetpacklibsynAhịa Podcastajụjụ ọnụ martechPodbeanakwụkwọ ndekọ aha Podcastakwụkwọ ndekọpọdkastị ndepụtapọdkastịmetrik Podcastnkwalite Podcastnchịkọta PodcastPodcastingpodchaserPodknifengosiSoundCloudSpotifyspreakerstitchernyefere gị pọdkastịụkọOnye TunisiaEmekawaveebe anabataebe iji kwaliteebee syndicateWordPress
Onye isi: wulite audiogram maka pọdkastị gị iji kwalite ọha mmadụ